SOMALIMEMO Wararka Sugan Ee Dunida iyo Dalka Hooyo
Sawirro 2596 Warsame Warfaa
Bandhig ciyaareed cajiib ah oo lagu soo dhaweeynayo munaasabadda ciidda ayaa lagu qabtay magaalooyin ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee ay maamusho Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Fantasyaha Ciidul Fidriga oo lagusoo gaba gabeeyay degmada Galhareeri [Sawirro].
04/05/2022 - 10:25:19 Sawirro Liibaan Jeexoow
Wilaayada islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa lagusoo gaba gabeeyay dabaal degyadii maalmaha ciiddul Fidriga.
03/05/2022 - 21:27:30 Sawirro Warsame Warfaa
Waxaan goordhow helnay ku dhawaad 100 sawir oo laga soo qaaday xerada ciidamada Burundi ee deegaanka Ceel-Baraf oo saaka weerar xoogan ay ku qaadeen ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab.
Sawirro: Magaalada Jilib oo laga oogay munaasabadda Ciidul Fidriga.
02/05/2022 - 20:10:03 Sawirro Liibaan Jeexoow
Kumanaan kun shacab ah ayaa ku ciiday fagaaraha weyn ee magaalada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe.
Sawirro: Deegaanka Kuunyo Barroow oo maalintii 1aad looga dabaal degay Ciidul Fidri.
02/05/2022 - 19:41:15 Sawirro Liibaan Jeexoow
Degaanka Kuunyo Barrow ee wilaayada Shabeellaha Hoose waxaa maanta looga ciiday si aad iyo aad u heer sarreysa iyadoo boqollaal dadweyne ah ay salaadda Ciidda ku tukadeen musalle weyn oo ku yaalla deegaanka..
Sidee looga Ciiday degmada Jamaame ee Jubbada hoose? Sawirro.
02/05/2022 - 17:33:50 Sawirro Liibaan Jeexoow
Degmada Jamaame oo kamid ah Wilaayaada islaamiga ah Jubbooyinka waxaa maanta oo ku beegan maalinta koowaad ee Ciidul Fidril-Mubaarak looga ciiday si weyn.
Sawirro: Degmada Saakoow oo si heer sare ah loogu damaashaaday Munaasabadda Ciidul Fidriga.
02/05/2022 - 17:04:13 Sawirro Liibaan Jeexoow
Kumanaan kun shacab ah ayaa munaasabadda Ciidul Fidriga ku oogay munaasabadda Ciidul Fidriga.
Sawirro: Magaalada Galhareeri oo si si heer sare ah looga oogay munaasabadda Ciidul Fidriga.
02/05/2022 - 11:56:41 Sawirro Liibaan Jeexoow
Degmooyinka iyo deegaanada Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa maanta si wada jir ah looga wada ciiday maalinta kowaad ee ciidul Fidriga iyadoona dadka Muslimiinta ay salaadda Ciidda kuwada dukadeen fagaara yaal wilaayada u iclaamisay bulshada Muslimka ah in ay Salaadda ku dukadaan.
Sidee Xalay Looga Dabaaldegay Magaalooyinka Wilaayaataka Islaamiga
02/05/2022 - 08:41:11 Sawirro Warsame Warfaa
Dagaaldegyo aad u ballaaran ayaa xaley ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaalla koonfurta Soomaaliya, halkaas oo dadweynuhu ay isugu hambalyeeynayeen munaasabadda ciidda.
Dabaaldegyo lagusoo Dhaweynayo munaasabadda Ciidda oo ka Socda Wilaayaatka Islaamiga [SAWIRRO].
01/05/2022 - 21:33:03 Sawirro Warsame Warfaa
Magaalooyinka ku yaalla wilaayaatka Islaamiga ayaa caawa laga soo sheegayaa dabaaldegyo ballaaran oo ay sameeyaan dadweynaha kuwaas oo isugu hambalyeeynaya Munaasabada ciidda.
Sawirro: Ergooyin Ka Laabtay Doorashada Xildhibaanada Oo Isku Dhiibay Al-Shabaab.
13/04/2022 - 15:25:02 Sawirro Warsame Warfaa
Wilaayaatka islaamiga ah ee ay maamusho Xarakada Al-Shabaab waxaa ku qulqulaya ergooyin u badan kuwii doortay xildhibaanadii 2016, kadib markii loogu baaqay in ay Alle uga towbad keenaan doorashada nin sheegtay inuu isagu yahay sharci dajiye.
Deegaano ka Tirsan Gobolka Sanaag oo Laga Sameeyey Gurmad Raashiin Qeybin ah [SAWIRO]
07/04/2022 - 17:15:00 Sawirro Warsame Warfaa
Gudiga gurmadka Abaaraha ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa raashiin qeybin ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo ay abaaruhu saameeyeen.
SAWIRRO: AlShabaab oo u Gurmaday dad ay duqeeyeen ciidanka Uganda.
30/03/2022 - 00:31:48 Sawirro Warsame Warfaa
Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/hoose ayaa garab istaagtay dadka ku dhaqan tuulada Siigaale oo u dhow degmada Jannaale, kuwaasoo dhawaan duqeyn ba'an kala kulmay ciidanka Uganda ee heysta Jannaale.
DAAWO: Sh. Aadan Sunne oo ka Warbixiyay Sababtii uu Uga Soo Haajiray Hargeysa, Uguna Biiray Al-Shabaab.
26/03/2022 - 19:40:37 Sawirro Warsame Warfaa
Sheekh Aadan C/Raxmaan Warsame oo ku magacdheer (Sh. Aadan Sunne) ayaa muxaadaro maqal iyo muuqaal ah oo uu jeediyey isagoo ku sugan wilaayaatka Islaamiga ee ay maamusho Xarakada Shabaabul Mujaahidiin markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay sababaha keenay inuu kasoo haajiro magaalada Hargeysa…
Sawirro : Xaflad loo qabtay 60 Arday oo Qur'aanka Kariimka Xifdiyay.
24/03/2022 - 12:22:20 Sawirro Liibaan Jeexoow
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada Jilib ayaa loo qabtay 60 arday oo dhamaysatay xifdinta quraanka Kariimka.
Hay'adda Al-Ixsaan oo gurmad Raashin qeybin ah ka sameysay degmada Buq Aqable.
19/03/2022 - 08:56:19 Sawirro Liibaan Jeexoow
Boqolaal qoys oo ku dhaqan degmada Buq aqable iyo deegaanada hoosyimaada ayaa ka faa ideystay raashiin qeybin degmada ay ka sameysay jamciyadda Al-ixsaan Al-kheyriyah, Waxaa raashiinka la siiyay qoysas ay si aad ah u saameysay abaarta jirta.
Gurmad Raashiin Qeybin ah oo Laga Sameeyey Tuulada Buula-Cadeey
09/03/2022 - 22:53:01 Sawirro Warsame Warfaa
Gudiga gurmadka Abaaraha ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii wada dadaalada lagu caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen kunool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Degmada Salagle: Raashiin Qeybin Loo Sameeyey Qoysaska Abaaruhu Saameeyeen [SAWIRO]
09/03/2022 - 22:34:39 Sawirro Warsame Warfaa
Gudiga gurmadka Abaaraha ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa raashiin qeybin ka sameeyey degmada Salagle, halkaas oo ay soo degeen qoysas fara badan oo ku xoolo beelay abaaraha ka jira gobolka Gedo.
Gurmad Raashin Qeybin ah oo Laga Sameeyey Degmada Saakoow [SAWIRRO].
08/03/2022 - 23:02:55 Sawirro Warsame Warfaa
Gudiga gurmadka Abaaraha ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad raashiin ah gaarsiiyey dadka kasoo barakacay abaaraha ee kunool degmada Saakoow ee gobolka Jubada Hoose.
Badhaadhe: Raashiin Qeybin loo Sameeyey Dadka Abaaruhu Saameeyeen [SAWIRRO].
08/03/2022 - 22:29:30 Sawirro Warsame Warfaa
Gudiga gurmadka Abaaraha ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weli sii wada gurmadka loo sameeynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee kunool wilaayaatka Islaamiga.